တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမအောင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တောရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာမသွားလုပ်သောအခါ…z – Alanzayar
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမအောင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တောရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာမသွားလုပ်သောအခါ…z
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမအောင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တောရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာမသွားလုပ်သောအခါ…
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမအောင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တောရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာမသွားလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေ နားလည်အောင် စာကို ရှင်းမပြတတ်တော့အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။
ပါးပြင်ပေါ်က ကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကို အေမက ပွတ်သပ်ပေးရင်း သမီးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ရှိမှာပါ လို့ သူ့ကို နှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မြို့ပေါ်တက်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့တယ်။
မကြာဘူး.. အင်္ကျီစညှပ်ရာမှာ နှေးကွေးလွန်းတယ် ဆိုပြီး အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြန်တယ်။ မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ အလုပ်မှာ စစချင်း နှေးကွေးတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ သမီးက ဘာမှ မလုပ်ဖူးဘဲ ကျောင်းပဲတက်ခဲ့လို့ ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ အေမက သူ့ကို နှစ်သိမ့်ပြန်တယ်။အလုပ်ပေါင်းစုံ သူလုပ်ခဲ့တယ်။
အလုပ်တိုင်းတစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ ထုတ်ခံလိုက်ရတာချည်းပဲ။ စိတ်ပျက်အားငယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာတဲ့ သူ့ကို အေမက အပြစ်မတင်ဘဲ အမြဲနှစ်သိမ့် အားပေးခဲ့တယ်။အသက် ၃၀ မှာ တတ်ထားတဲ့ပညာလေးနဲ့ ဆွံ့အ နားမကြားကျောင်းမှာ ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက် မသန်မစွမ်းကလေးတွေအတွက်ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် မသန်မစွမ်းသူတွေ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တယ်။အခုဆိုရင် သူဟာ အောင်မြင်တဲ့ သူဌေးတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်တဲ့သမီးတစ်ဦးက အိုမင်းနေတဲ့ အမေရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး နှစ်ရှည်လကြာ သူသိချင်ခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့ အဖြေကို မေးခဲ့တယ်။
အဲတာက သူကျရှုံးနေတဲ့အချိန်၊ အနာဂတ်တွေမဲမှောင်နေတဲ့အချိန်၊ ရှေ့ဆက်ဖို့ လမ်းတွေပျောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အေမက ဘာအကြောင်းကြောင့်သူ့အပေါ် ယုံကြည်မှုတွေ ရှိနေသေးသလဲ? ဆိုတာဖြစ်တယ်။အေမ့ရဲ့ အဖြေက ရိုးရိုးလေးပါ။
အေမက ပြောတယ်.. မြေတစ်ကွက်မှာ ဂျုံစိုက်လို့ မဖြစ်ထွန်းရင်၊ ပဲပြောင်းစိုက်ကြည့်ပါ။ ပဲစိုက်လို့လဲ မဖြစ်ထွန်းရင် နေကြာ စိုက်ကြည့်ပါ။ နေကြာစိုက်လို့လဲ အဆံတွေ မပြည့်ခဲ့ရင်တစ်ခြားအပင် ပြောင်းစိုက်ကြည့်ပါ။
ပန်းပွင့်မှာတော့ သေချာတယ်။မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးပင်တစ်ပင်တော့ ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်အေမ့ရဲ့ စကားကိုကြားတော့ သူငိုမိတယ်။
မိခင်ရဲ့ မေတ္တာ၊ ယုံကြည်မှုနဲ့အားပေးမှုတွေက မျိုးမသန်တဲ့ ပျိုးတစ်ပင်ကိုတောင် အညှောင့်ပေါက်စေကြောင်းသူနားလည်လိုက်တယ်။မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးတစ်ပင်တော့ရှိပါတယ်။
ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့သဲကန္တာရမှာ ရှားစောင်းပင်တွေတောင်လှပတဲ့အပွင့်နဲ့ရှင်သန်ပေါက်ရောက် နိုင်သေးတယ်။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသပဲရောက်ရောက်ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ နေရာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။
သင့်တော်တဲ့ နေရာမှာကိုယ်တတ်စွမ်းသလောက် လွပတဲ့ အပွင့်တွေကို ဖူးပွင့်ကြရအောင်။ Credit
တက်ကသိုလျဝငျတနျးမအောငျတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက တောရှာတဈရှာမှာ ဆရာမသှားလုပျသောအခါ…
တက်ကသိုလျဝငျတနျးမအောငျတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက တောရှာတဈရှာမှာ ဆရာမသှားလုပျခဲ့တယျ။ ကြောငျးသားတှေ နားလညျအောငျ စာကို ရှငျးမပွတတျတော့အလုပျထုတျခံလိုကျရတယျ။
ပါးပွငျပျေါက ကလြာတဲ့မကျြရညျတှကေို အမေက ပှတျသပျပေးရငျး သမီးနဲ့ သငျ့တျောတဲ့ အလုပျတဈခုတော့ရှိမှာပါ လို့ သူ့ကို နှဈသိမျ့ခဲ့တယျ။ အဲဒီနောကျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့မွို့ပျေါတကျပွီး အလုပျသှားလုပျခဲ့တယျ။
မကွာဘူး.. အင်ျကြီစညှပျရာမှာ နှေးကှေးလှနျးတယျ ဆိုပွီး အလုပျထုတျခံလိုကျရပွနျတယျ။ မကြှမျးကငျြသေးတဲ့ အလုပျမှာ စစခငျြး နှေးကှေးတာ ဘာမှမဖွဈဘူး။ သမီးက ဘာမှ မလုပျဖူးဘဲ ကြောငျးပဲတကျခဲ့လို့ ဖွဈလိမျ့မယျ လို့ အမေက သူ့ကို နှဈသိမျ့ပွနျတယျ။အလုပျပေါငျးစုံ သူလုပျခဲ့တယျ။
အလုပျတိုငျးတဈဝကျတဈပကျြနဲ့ ထုတျခံလိုကျရတာခညျြးပဲ။ စိတျပကျြအားငယျပွီး အိမျပွနျလာတဲ့ သူ့ကို အမေက အပွဈမတငျဘဲ အမွဲနှဈသိမျ့ အားပေးခဲ့တယျ။အသကျ ၃၀ မှာ တတျထားတဲ့ပညာလေးနဲ့ ဆှံ့အ နားမကွားကြောငျးမှာ ဝငျလုပျခဲ့တယျ။
အဲဒီနောကျ မသနျမစှမျးကလေးတှအေတှကျကြောငျးတဈကြောငျး ဖှငျ့နိုငျခဲ့တယျ။ နောကျထပျ မသနျမစှမျးသူတှေ သုံးစှဲနိုငျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေိုဖွနျ့ဝခေဲ့တယျ။အခုဆိုရငျ သူဟာ အောငျမွငျတဲ့ သူဌေးတဈဦး ဖွဈခဲ့ပါပွီ။
တဈနမှေ့ာ အောငျမွငျတဲ့သမီးတဈဦးက အိုမငျးနတေဲ့ အမရှေမှေ့ာ ထိုငျပွီး နှဈရှညျလကွာ သူသိခငျြခဲ့တဲ့ မေးခှနျးတဈခုရဲ့ အဖွကေို မေးခဲ့တယျ။
အဲတာက သူကရြှုံးနတေဲ့အခြိနျ၊ အနာဂတျတှမေဲမှောငျနတေဲ့အခြိနျ၊ ရှဆေ့ကျဖို့ လမျးတှပြေောကျနတေဲ့အခြိနျမှာ အမေက ဘာအကွောငျးကွောငျ့သူ့အပျေါ ယုံကွညျမှုတှေ ရှိနသေေးသလဲ? ဆိုတာဖွဈတယျ။အမေ့ရဲ့ အဖွကေ ရိုးရိုးလေးပါ။
အမေက ပွောတယျ.. မွတေဈကှကျမှာ ဂြုံစိုကျလို့ မဖွဈထှနျးရငျ၊ ပဲပွောငျးစိုကျကွညျ့ပါ။ ပဲစိုကျလို့လဲ မဖွဈထှနျးရငျ နကွော စိုကျကွညျ့ပါ။ နကွောစိုကျလို့လဲ အဆံတှေ မပွညျ့ခဲ့ရငျတဈခွားအပငျ ပွောငျးစိုကျကွညျ့ပါ။
ပနျးပှငျ့မှာတော့ သခြောတယျ။မွတေဈကှကျအတှကျ သငျ့တျောတဲ့ ပြိုးပငျတဈပငျတော့ ရှိပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာအောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ရိတျသိမျးနိုငျပါလိမျ့မယျအမေ့ရဲ့ စကားကိုကွားတော့ သူငိုမိတယျ။
မိခငျရဲ့ မတ်ေတာ၊ ယုံကွညျမှုနဲ့အားပေးမှုတှကေ မြိုးမသနျတဲ့ ပြိုးတဈပငျကိုတောငျ အညှောငျ့ပေါကျစကွေောငျးသူနားလညျလိုကျတယျ။မွတေဈကှကျအတှကျ သငျ့တျောတဲ့ ပြိုးတဈပငျတော့ရှိပါတယျ။
ပူပွငျးခွောကျသှတေဲ့သဲကန်တာရမှာ ရှားစောငျးပငျတှတေောငျလှပတဲ့အပှငျ့နဲ့ရှငျသနျပေါကျရောကျ နိုငျသေးတယျ။ ဘယျနရော၊ ဘယျဒသေပဲရောကျရောကျကိုယျနဲ့သငျ့တျောတဲ့ နရောတဈခုတော့ ရှိပါတယျ။
သငျ့တျောတဲ့ နရောမှာကိုယျတတျစှမျးသလောကျ လှပတဲ့ အပှငျ့တှကေို ဖူးပှငျ့ကွရအောငျ။ Credit
Previous Article ရမျးငှကွေ့ားက ခငျြးပွညျနယျရဲ့ အလှအပမြား …
Next Article ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ နောက်ကြောင်းတွေပေါ်ပြီ see more…